ဦးအောင်ကိုလတ် ကို သတိတရနဲ့မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးလိုက်တဲ့ အစီစဉ်တင်ဆက်သူ ကျော်ထက်အောင် – Cele Snap
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၁၀)ရက်နေ့ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် အဆိုတော် ဒါရိုက်တာ ဝါရင့် အနုပညာရှင်ကြီး ဦးအောင်ကိုလတ်ရဲ့ မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် ဦးအောင်ကိုလတ်က အသက် (၆၇)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအောင်ကိုလတ်ရဲ့မွေးနေ့ရက်လေးအတွက်ကို သားတပည့်လို ချစ်ခင်ရတဲ့ ကျော်ထက်အောင်ကလည်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးထားတယ်။”Happy Birthday my dear Daddy! DaDa!. Be healthy. Be happy. Be more success!. Love you !Your sons!” ဆိုပြီး သတိတရနဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Happy Birthday ပါ ဦးအောင်ကိုလတ်ရေ။ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို ပိုမိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ဦးအောင်ကိုလတ်ရဲ့မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦး ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။